MAI မှ စငျကာပူနိုငျငံရှိ အဆောငျနေ မွနျမာလုပျသား ၈၀၀ ကြျောကို ပံ့ပိုးကူညီ - Myanmar Builders Guide
အပွညျပွညျဆိုငျရာ မွနျမာလကွေောငျး MAI က အဆောငျမြားတှငျ အပွငျထှကျခှငျ့ မရသော
ွမနျမာနိုငျငံသား လုပျသားမြားအတှကျ ထောကျပံ့ကူညီခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျး၏ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာတှငျ တငျပွထားပါသညျ။
MAI မှ စင်ျကာပူနိုငျငံတှငျ ပိတျမိနသေောမွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျ ထောကျပံ့အကူအညီပေးခဲ့ခွငျး
MAI သညျ MSCT PTE LTD မှ ဦးဇျောအောငျ၏ ပူးပေါငျးကူညီမှုဖွငျ့ လကျရှိဖွဈပှားနသေောအသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ကူးစကျလှယျကပျ ရောဂါကွောငျ့ စင်ျကာပူနိုငျငံတှငျပိတျမိနပွေီးအသှားအလာကနျ့သတျနထေိုငျရသော အဆောငျ အသီးသီးရှိ မွနျမာနိုငျငံသား ၈၀၀ ကြျောအတှကျ ကူညီထောကျပံ့မှုမြားကို မလေကုနျအထိအသုံး ပွုနိုငျရနျ ပံ့ပိုးလှူဒါနျးပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါ သညျ။
လိုအပျနသေူမြားအတှကျ အခွခေံထောကျပံ့မှုမြားကိုပံ့ပိုးကူညီပေးရုံသာမက ၎င်းငျးတို့နထေိုငျ ရာနရောမြားသို့ တနလြေှ့ငျအစားအစာ ၄၅၀ ခနျ့အားပွငျဆငျပေးပို့ခွငျးဖွငျ့ ကူညီထောကျပံ့မှုမြားကိုအနီးကပျဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ ထောကျပံ့လှူဒါနျးသညျ့ပစ်စညျးမြားအား စတေနာအလြောကျ လိုကျလံပို့ဆောငျပေးခဲ့သော ဦးဇျောအောငျအား ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါကွောငျးနှငျ့ ကြှနျုပျတို့ မွနျမာနိုငျငံသားမြား ယခုကဲ့သို့ အကူအညီလိုအပျနခြေိနျတှငျ ပံ့ပိုးကူညီလှူဒါနျးရခွငျးအတှကျလှနျစှာဂုဏျယူဝမျးမွောကျမိပါသညျ။
MAI မှ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အဆောင်နေ မြန်မာလုပ်သား ၈၀၀ ကျော်ကို ပံ့ပိုးကူညီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ မြန်မာလေကြောင်း MAI က အဆောင်များတွင် အပြင်ထွက်ခွင့် မရသော မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် တင်ပြထားပါသည်။
MAI မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ပိတ်မိနေသောမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထောက်ပံ့အကူအညီပေးခဲ့ခြင်း
MAI သည် MSCT PTE LTD မှ ဦးဇော်အောင်၏ ပူးပေါင်းကူညီမှုဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်လွယ်ကပ် ရောဂါကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ပိတ်မိနေပြီးအသွားအလာကန့်သတ်နေထိုင်ရသော အဆောင် အသီးသီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈၀၀ ကျော်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို မေလကုန်အထိအသုံး ပြုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
လိုအပ်နေသူများအတွက် အခြေခံထောက်ပံ့မှုများကိုပံ့ပိုးကူညီပေးရုံသာမက ၎င်းတို့နေထိုင် ရာနေရာများသို့ တနေ့လျှင်အစားအစာ ၄၅၀ ခန့်အားပြင်ဆင်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုအနီးကပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသည့်ပစ္စည်းများအား စေတနာအလျောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော ဦးဇော်အောင်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ယခုကဲ့သို့ အကူအညီလိုအပ်နေချိန်တွင် ပံ့ပိုးကူညီလှူဒါန်းရခြင်းအတွက်လွန်စွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
MAI Lends-a-Hands to Stranded Myanmar Citizens in Singapore!
MAI, in collaboration with Mr. Zaw Aung from MSCT Pte. Ltd., has committed to support more than 800 Myanmar citizens who are stranded in various dormitories quarantine facilities in Singapore currently due the ongoing pandemic until end of May.
We work very closely to provide not only basic provisions but also distribute approximately 450 mealsaday to those in need.
We would like to thank Mr. Zaw Aung who voluntarily delivered these donation items and we are proud to have assisted Myanmar citizens in need!